Chinja maMKV Mafaira ku MP4 neMahara MKV2ATV Chikumbiro | Ndinobva mac
Makore mashoma apfuura, zvese iOS uye Apple TV yakatsigira imwe vhidhiyo fomati fomati. Asi nekuuya kweyechitatu-bato kunyorera, kuenderana uku kwaive kupera uye parizvino pane yedu iPhone kana Apple TV isu tinogona kutamba chero mhando revhidhiyo faira.
Nekudaro, zvinoenderana nemuenzaniso, mafaira muMKV fomati anogona kunge akadzipwa pane yedu kifaa, kunyanya nekuda kwehukuru hwayo. Mafaera eMKV ane, mukuwedzera kune vhidhiyo track, akati wandei odhiyo uye Subtitle makwara. Nemaapplication akaita seMKV2ATV tinogona kutora chete matraki anotifadza zvakanyanya.
Kana uchidhonza matraki anotifadza zvakanyanya muMP4 fomati, yekupedzisira faira saizi yakaderedzwa, pamwe nehunhu, kunyangwe padiki padiki. MKV2ATV inotibvumidza kusarudza kuti ndeapi maodhiyo uye mavhidhiyo maratidziro atinoda kutora, tinogona chete kusarudza imwe, sezvo fomati yeMP4 isingatsigire anopfuura rimwe.
Ichi chishandiso chinotibvumidza isu kuita iyi batch maitiro, ndiko kuti, tinogona kuwedzera mafirimu akasiyana uye tinotora kubva kwavari chete iyo vhezheni iyo inotinakidza isu zvakanyanya kutamba pane yedu yaunofarira kifaa. Nezve ruzha, iko kushanda kunoremekedza 5.1 kurira, chero bedzi michina yedu ichienderana.
MKV2ATV yaive nemutengo wenguva dzose paMac App Store ye5,49 euros, asi kwemwedzi mishoma, mushambadzi anozvipa kwatiri mahara kuburikidza neiyi link yandinosiya panopera chinyorwa ichi. Izvo zvidiki zvinodiwa kuti ukwanise kushandisa iyi application ndeye macOS 10.13, saka kana komputa yako iine vhezheni yapfuura, zvinosuwisa kuti haugone kuishandisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac zvirongwa » Chinja mafaera eMKV kuita MP4 neyemahara MKV2ATV app
Apple ichaita email yakawanda yakavharidzirwa paMacOS nekuda kwaSiri